Zoster - kuyinto engathí sina kakhulu esehlaselwa isifo sesikhumba esenyanyekayo, okuyinto evame libhekene ukubukeka ngamaqhubu ezibangela ukulunywa eqinile futhi babulawa. Ngaphezu kwalokho, kungase kuvele ukuvuvukala nezicubu necrosis. Ngakho-ke kubaluleke kakhulu ukuba sithole isikhathi bayashintshana ekufukameleni of wayencisha umuntu, ngesikhathi ukunciphisa yemiphumela yokugula.
Uhlobo oluvame kakhulu - umbandamu zoster. Isikhathi bayashintshana ekufukameleni we wayencisha umuntu zingahluka ngokuya ngezinto eziningi. Ngokuvamile, zokhahlamba kusuka amasonto ambalwa kuya ezinyangeni ezimbili.
Ngokuvamile, isifo sisuka isilwane esigulayo noma wobuntu - impilo. Indlela ejwayelekile kakhulu yokudlulisa i - contact-yasendlini. Futhi ngokuvamile itheleleke ngokuthinta isilwane esigulayo, usebentisa tintfo letingemadayimenshini lamatsatfu, ngokuthinta angcolile, noma ukuvakashela izindawo ezabiwe.
Lapho lomuntu onegciwane noma isilwane athinte noma iyiphi izinto, zingabantu izinhlayiya ibala noma izinwele. Zingabhekana ngokuphumelelayo isikhathi eside kakhulu. Umphumela ungaba ukuphahlazekelwa umqedazwe, ezifana ezikoleni kanye izinkulisa. Ngaphezu kwakho konke ingozi yokungenwa yilesi umbandamu kwenzeka entwasahlobo and ekwindla izinyanga.
I Lesi sifo siphatha kakhulu ukutheleleka yilo iziguli isifo sesikhumba ngubani azehlise amasosha omzimba, okuyinto ukusebenza nge umhlaba ngaphandle amagilavu, ne imifantu futhi microdamages isikhumba. Futhi uma ehlala isikhathi eside nge kwezilwane ezinegciwane noma abantu.
bayashintshana ekufukameleni inkathi
Isikhathi bayashintshana ekufukameleni we umbandamu kubantu esiphakathi esisodwa ezinsukwini ezimbili nengxenye ezinyangeni ezimbili. Izinga ukuthuthukiswa izifo fungal kuxhomeke kulokho-ke, ekugcineni kwahlaluka ukuthi agent causative kubantu.
Kuyinto into eyodwa uma igciwane ezingabalulekile. Kulokhu, inkathi bayashintshana ekufukameleni ngoba wayencisha umuntu ngeke kube isikhathi esingaphezu kwesonto. Izimpawu yokuqala ukuvela izinsuku 5-6 ngemva kokungenwa i-ejenti causative lesi sifo.
Ukuphuca nezinye izinhlobo, ezifana infiltrative-suppurative, awukwazi bazikhulumele ngisho izinyanga ezimbalwa. Kulokhu, ukucacisa lapho kwenzeka ukutheleleka, ngokuvamile kuba akunakwenzeka.
Zoster kuthinta iyiphi ingxenye isikhumba womuntu, kodwa ngokuvamile isifo eba ekhanda. Kulokhu, uma isiguli semali izinwele, izimpawu zokuqala ukutheleleka kungenzeka kungaqashelwa.
Kufanele ukhathazeke uma uboya ngaphandle izizathu inhloso uqale ukuphula fall out. Futhi kukhona uyaxebuka kanye ukulunywa babulawa. ukutheleleka focus ukuvuvukala siqala ukuvela izinsuku 7-10 emva kokutheleleka.
Ngokuvamile, ngemva kwenkathi bayashintshana ekufukameleni ukuthi kumphuce indoda, kwakhiwa izikhungo eziningana usayizi ngokwanele ezinkulu. Elibazungezile kwakhiwa ukuqubuka futhi iqhubeka. Kulokhu, izinwele uwela out nakakhulu, nemikhawulo yomhlaba embozwe isici grey patina.
Uma ezimise okwama-tile livela emzimbeni womuntu, uzothola kube lula. Ngesikhathi emuva, imikhono, imilente noma amabele avele isikhumba ukuvuvukala, umbala kungase kube pink noma obomvu.
Uma yashayiswa ukhunta we ipuleti nail, uyogcina ube Murky, indawo kanye okwe baze baqale sidilike.
In the version sad, nezifo ezingamahlala khona izinwele fall out kakhulu, kwakheka lubonakale izindawo Bald, ukulunywa sithule. izindawo yakha ingahluka, bavame ihlaba umkhosi iphunga ogulayo.
imfiva angagcina at ifomu infiltrative-suppurative ukutheleleka, ubuthakathaka, izindlala zamanzi ukwandisa wonke umzimba. Futhi leli fomu kuhambisana migraine. Lena enye yezinhlobo ezingu amafomu olunzima. Isibalo izilonda kungaba eziningi eziningana.
Suka izilwane wayencisha
Enye yezindlela ezivamile kuya batheleleke nge umbandamu - uyithola ezilwaneni. Inkampani yenethiwekhi ngokuvamile amakati abangenamakhaya. Ngakho-ke kubalulekile ukukhumbula ukuthi ukuze uthumele zoster. Isikhathi bayashintshana ekufukameleni lesi sifo ukwelashwa eside kakhulu, futhi ekuqaleni kuka-kungaba nzima kakhulu.
Izimpawu zalesi ezingemnandi kakhulu, futhi basheshe baphaphame futhi ngaphandle kwemiphumela, njengoba umthetho, akunakwenzeka. At the site ukutheleleka avele izindawo esebunzini isifo isimo ezidingekayo - ezinzima nezinwele. Kodwa ungathola elinegciwane nanoma iyiphi, ngisho ahlangane nabo sesilwane. Okubalulekile, ungathathi lesi sifo ngoba dandruff ezinzima, kodwa zifana kakhulu kusaqalwa. Eshukunyiswe ekwelapheni dandruff, ungakwazi sina uqale zoster.
Isikhathi bayashintshana ekufukameleni we wayencisha umuntu kusukela ikati elinegciwane, kungase kube amaviki ambalwa. Ngakho-ke, kungcono ukuqeda konke ukuxhumana futhi uxhumane ne izilwane ezindizayo. Noma uma unquma ukuthatha isilwane endlini, evela emgwaqweni, ngaphambi kokukhuluma amyisa efulethini, vakashela udokotela wezilwane. Lo chwepheshe uzokwazi Orient wena, unaso yini umbandamu ikati noma ezinye izifo, libeke izidakamizwa adingekayo kokubili izilwane wena kanye namalungu omndeni.
isifo kakhulu ezingemnandi - umbandamu Elisengozini. Kubantu, inkathi bayashintshana ekufukameleni amakhulu, ukuze isifo ngokuvamile ukusebenzisa, bese eside ukukhokha ngenxa yobudedengu babo.
Hhayi nje amakati kanye nezinye izilwane abe abathwali zoster. Noma yimuphi umuntu has a ingozi engathi sína ukungenwa yokuthola pink ulele Gibert. Lesi sifo dermatological, kuyilapho imvelo nomzimba. I-ejenti causative ngokuvamile ukhonza herpes igciwane ethize.
Lesi sifo ngokuvamile kubonakala ngemva imikhuhlane ezinzima. Futhi yimuphi - SARS nezifo Umkhuhlane ukuba emphinjeni nezindlebe. Ngokuvamile, ukuthuthukiswa pink wayencisha isigaba asebenzayo kuvumelana imikhuhlane.
Bona lolu hlobo bula kulula. Amachashaza ivele isikhumba kanye nokuqhuma eziningi. Ikakhulukazi kufanele uqaphele abantu buthaka omzimba. Kulokhu, abanye, lolu hlobo wayencisha ngokuvamile asithathelwani. Isikhathi bayashintshana ekufukameleni of pink wayencisha umuntu kusukela ezinsukwini ezimbili kuya emasontweni amathathu.
Olunye uhlobo ulele - ezimise okwama-tile. Iphinde uba ejenti igciwane herpes. Ngaphezu kwalokho, ethize - zoster. Hlukanisa kube nokwenzeka indawo Izilonda. Bona zivumelana indawo umuntu nerve iziqu.
Inkinga ezimbi kakhulu wukuthi isikhathi bayashintshana ekufukameleni of ezimise okwama-tile, umuntu angase abe amashumi eminyaka. Kulokhu, ngisho noma umuntu othwala igciwane, kungaba nguye lungekho. Ngokuvamile lesi sifo kwenzeka avuthiwe kanye nabantu abadala. Umuthi awurekhodiwe izimo zokugula izingane ezingaphansi kweminyaka engu-10 iminyaka.
Lolu hlobo Ukuncisha engamboziwe amaconsi sisemoyeni. Catch igciwane kungaba ngaphansi sisondelene neqondile. ngokuqapha elithile kufanele kube nabantu abangasithandi egula ku upokisi ebuntwaneni.
Umgomo oyinhloko ekwelapheni zoster ukubhujiswa pathogen. Lokhu singakwenza ngokulitadisha yokwelapha wendawo. Kuhlanganisa engayitholi njalo izidakamizwa antifungal, ikakhulukazi ezimweni ezimbi kakhulu, onguchwepheshe angabeka hormone ekhethekile ukusiza umzimba ukulwa negciwane. Futhi esetshenziswa multivitamins, yensimbi supplements kanye phytin, imijovo Aloe akhiphe.
Ekhaya, kunconywa ukuthi iphathe abathintekayo isikhumba amaphesenti-5 isixazululo iodine, ukusebenzisa okhilimu anti-fungal kanye yokugcoba.
Zoster - isifo esingaphatha futhi kufanele kuvinjelwe. kumelwe sifeze ukuhlolwa njalo wonke amalunga omndeni ngoba izimpawu zokuqala ze-zokuvimbela ngempumelelo.
Umuntu ogulayo kufanele ngokushesha ukuhlukanisa, afeze magciwane njalo ngezinto zakhe nezinye izinsimbi.
Ngemva kokuvakashela zangasese zomphakathi nezinye izindawo ukusetshenziswa umphakathi ugeze izandla ngokuphelele nsuku zonke ukuze ushawa, ungayisebenzisi eminye siqu inhlanzeko izinto zabantu - Combs, izingubo zangaphansi. Hhayi mbeni izilwane ezindizayo.
Izimbangela, izimpawu kanye nokwelashwa Turner Syndrome